Kusho ukuthini ukumba amazambane ngephupho: izincwadi zokuphupha, ukuhumusha kwengqondo
Iyini iphupho lapho umba khona amazambane? Ukuhumusha
Njengoba amaphupho ngamazambane ahlobene nemibono emibili: umhlaba kanye nemifino ngokwayo, kungenzeka ukuhumusha imibono enjalo kusuka kumaphuzu amabili okubuka. Amazambane abamele ukuchuma, kodwa inhlabathi ekuqondeni abantu abaningi ihlotshaniswa nomkhuba obi kakhulu - umngcwabo.
Ukuze uqondisise kahle izindinganiso, udinga ukucabangela lokho okwenzile, bekuyini isivuno nokuthi izimpande zazibukeka kanjani. Kuphela emva kokuhlaziya zonke lezi zici singathola incazelo eqondile yencwadi yephupho.
Labo abavame ukuhlanganyela emisebenzini efana nomhlaba bayazi ukuthi amaphupho anjalo avakashelwe ngesikhathi sokuvuna. Kodwa ngokwemibonakaliso engaqondakali, iphupho elinjalo lingasho ubunzima obuningi ekufezeni umgomo oyifunayo.
Umphuphi kufanele azi ukuthi ukumba amazambane uthembisa ubunzima abaningi endleleni eya emgomweni. Ngakho-ke, ukukhetha kuhlala kumuntu ngokwakhe: angashiya lo mbono noma aqhubeke nokuya kuwo, naphezu kokuthi imizamo eyenziwe iyakudinga lokho okufunayo.
Ukumba amazambane ngefosholo kusho ukuthi imfihlakalo eminye izokwaziwa ngokushesha. Umphuphi uzokwazi ukuthola amaqiniso athakazelisayo azodlala indima ebalulekile empilweni yakhe yakudala. Izinguquko ezinjalo zingathinta ubuhlobo bomabhizinisi kanye nokuphila komuntu siqu.
Uma uphupha ukuthi ubumba izandla zakho, izitha zahlangana nxazonke zakho, ezakhela izinkathazo. Zama ukusakaza kancane mayelana nezinhlelo zakho futhi ngokucophelela ukuziphatha kwabanye.
Uma uzizwa ukhathele ngesikhathi sokuvuna, kufanele uqaphele ngokwengeziwe ngempilo yakho. Mhlawumbe ngeke kube yinto engadingekile ukuthatha iholidi noma ukuhlolwa okuphelele nodokotela.
Ukuhumusha kwephupho likaMiller kusikisela ukuthi ukukhetha izimpande izitshalo ezivela emhlabathini kuyisibonakaliso esihle. Kodwa ukutshala imifino kusho ukuthi manje usesikhathini esinomthwalo wemfanelo. Noma yiyiphi yezenzo zakho izoba uhlobo lwesisekelo sokufeza okuzayo, impumelelo nokuchuma.
Ukukhetha amazambane amakhulu kusho ukuthi isikhathi esiphila kakhulu sokuphila silindele wena. Yonke isenzo esenziwe nguwe sizoba nomthelela oqondile esikhathini esizayo. Ukuze uphumelele, zama ukuqedela yonke ibhizinisi eliqalisiwe.
UMiller uthi futhi ukuvuna kusho ukuthi isikhathi sokulwa kanzima siphelile futhi manje ungaphefumula ngokukhululekile futhi ujabulele imiphumela yomsebenzi wakho.
Uma kusetshenziselwa ukumba amazambane uthola elikhulu, uhlanzekile ngisho nezimpande ezisuka emhlabathini, amanani angaphambilini ayanda kuphela. Njengokubonga ngemisebenzi, uzothola inkazimulo, ukunqoba, ukuqashelwa kwabanye kanye nokuzuza okuhle kwezezimali.
Uma uphupha ukuthi ubamba amazambane amancane futhi abolile, khona-ke kufanele ulungiselelwe ngokwengqondo ukuze uthole umthamo omnyama empilweni. Cishe, ingqondo yakho yonke inomqondo othile. Kodwa kuzodingeka uyilahle, njengoba umsebenzi okhokhelwayo ungakhokhisi umsebenzi owenziwe.
Kubuye kwenzeke nokuthi oshonile usiza umphuphi ukuvuna. Ngokuhunyushwa okunye lokhu kungathembisa izinguquko ezincane empilweni, njengokuhamba okuncane noma ukuzama ukubonakala.
Ngakolunye uhlangothi, ukukhetha imifino emhlabathini ngosizo lomuntu oshonile kuyisixwayiso ukuthi esikhathini esizayo ungadinga usizo lwabangaphandle ukuze ufeze imigomo yakho. Into eyinhloko okumelwe uyikhumbule ukuthi ukuhumusha kahle iphupho lakho, udinga ukukhumbula hhayi kuphela umkhathi jikelele, kodwa nazo zonke izinhlobo imininingwane nokubukeka kwesitshalo sesitshalo.
Ingaziphi iphupho ngegazi?
Ungayichaza kanjani iphupho lapho ulahlekelwa khona isikhwama?
Ingqikithi eyenziwe yindabakwane: i-pigment Phantom 002 evela kuPat McGrath
Uma umyeni esebenza ngaso sonke isikhathi, lokho kusho ukuthini?
I-Pink dress Pugacheva: ukwehluleka kwemfashini noma ukuthola okuphumelelayo
Uhlela ukuba nomntwana oneminyaka engakanani?
I-pasta yaseMexico evela kubhontshisi
Ukudla onogwaja abahlobisa
U-Alexander Ovechkin no-Anastasia Shubskaya bashada?
Isinqumo sokwenza ingane nengane
Ukuxhumana okuphakathi kukaBuvvaya noDmitri Nagiyev beza ku-inthanethi
Amakhekhe nge-chocolate, ubisi oluncibilikisiwe namantongomane
Ukukhulelwa kwe-Hormonal - konke kusuka ku-A kuya ku-Z